Culture – The Ulwazi Programme
IMuti Market , eseWarwick Triangle eThekwini UMuthi (muti) igama lemithi yendabuko eSeningizimu ne-Afrika enyakatho njengeLake Tanganyika. Igama elithi muti lisuselwa egameni lesiZulu elisho umuthi, okuyimpande yawo -thi. Imithi yesintu yase-Afrika isebenzisa imikhiqizo ehlukahlukene yemvelo, eminingi yayo etholakala ezihlahleni. Ngalesi sizathu, umuthi ngokuvamile waziwa ngokunyanga, kepha ubuye usetshenziswe ekwelapheni kwendabuko. Eningizimu ye-Afrika, igama elithi umuthi lisetshenziswa … Read more
Ingabe abantu bayakholelwa emakhambini esintu ukuthiba iCOVID?
Ukusetshenziswa kwamakhambi esintu yinto ejwayelekile futhi yinto engesilona ihlazo. Noma ingesilona ihlazo kodwa ke kukhona futhi kuningi ukucwaseka nokubekeleka phansi kokusetshenziswa kwamakhambi esintu. Iningi labantu lincamela ukuya kubahlengikazi abasebenzisa indlela yesilungu yokwelapha kunendlela yesintu. Abanye bayakufihla ngisho ukukufihla ukuthi umuntu ubeye esangomeni noma enyangeni ukuyothola usizo ngenkinga abhekene nayo. Kwisifunda sakwaZulu, baningi kakhulu abasebenzisa amakhambi … Read more
Categories Culture, Environment Tags Amakhambi, Covid 19, umhlonyane
Ubuhle bokuhloba ngeHenna
Ihenna ejwayelekile ngudayi owenziwa ngesihlahla iLawsonia, senziwa sampuphu (powder) sihlanganiswe namanzi alamula, ushukela kanye lavender ne tea tree oils kanti ikhona emnhlophe njengoba ubona izithombe ngezansi. Ihenna wumdwebo wokuhlobisa umzimba eyenziwa ezandleni nasezinyaweni. Yize idume kakhulu ukusetshenziswa ngabasendiya (Indians) kepha iphinde ibe ingxenye yomlando wase Middle Eastern Asia na Afrika. Ngokomlando ukwaziswa kwehenna kwafundiswa ngama … Read more
Categories Culture, History Tags henna, mehndi ceremony
I-Africa’s Travel Indaba Iyabuya
I-Africa’s Travel Indaba ingomunye wemincimbi yezokuvakasha omkhulukazi e-Afrika. Lo mcimbi uzobuya kulonyaka ngemuva kweminyaka emibili ungekho ngenxa ye-Covid 19. Ukuqubuka kobhubhane i-Covid 19 kuphazamise izinto eziningi emhlabeni njikelele yaphoqa amabhizinisi amaningi ukuthi eyeke ukusebenza noma athole izindlela ezintsha zokuqhubeka nokusebenza. Indaba ngokuhlangayela itshengisa umhlaba kabanzi ngezokuvakasha zaseNingizimu Afrika kanye namazwe aseningizimu ye-Afrika (Southern Africa), ikhuthaza … Read more
Categories Culture, History, News Tags Africa's Travel Tourism, Durban ICC, eThekwini, Travel Indaba
Uma kuziwa kunqephu nokuzimisela abantu besifazane bayazifela. Kuye kuthiwe uma ubukeka kahle uzizwa kahle ( when you look good you good). Lokhu kufakazelwa umuntu uma egqoke kahle uye ubone noma ehamba ukuthi ayi cha uzizwa ngaphakathi. Angiphathi uma kuke kwaba nomcimbi umshado, umembeso noma ama-awards thizeni inqephu ephuma lapho idla lubi. Abanye bathanda ukuthungisa impahla … Read more